Su Myat Noe, Author at Chelmo News Portal - Page4of 5
Author: Su Myat Noe
Home›Author: Su Myat Noe (Page 4)
Su Myat Noe
ယောက်ျားကံမကောင်းတာကို အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
၁. ကိုယ်က မှားတယ်ဆိုပြီး အမြဲတမ်း အရှုံးပေးနေတဲ့သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အသိပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလည်း ခေါင်းငုံ့ခံတာဟာ မကောင်းတဲ့ အချက်တခုပါ။ ကိုယ်ကမလှလို့၊ မတော်လို့၊ ၀နေလို့ ဆိုပြီး ဒီအချက်လေးတွေကို စိတ်ထဲမှာအမြဲထားပြီးချစ်သူကပြောတာတွေကိုအကုန်လက်ခံနေတက်တယ်။
မနက်အိပ်ယာထရင် တွေးသင့်သော အချက်များ
မနက်အိပ်ယာထပြီး စတွေးသင့်သော အချက်များကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ၀၁. ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်မှာရှိတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကောင်းတဲ့နေ့၊ မကောင်းသောနေ့ဖြစ်တာတို့၊ ရာသီဥတု သာယာမယ်၊ မသာယာဘူးဆိုတာကို တွေးနေစရာမလိုပါ။ ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ရန် မိမိသာလျှင် အဓိကပါ။ ၀၂. အဖြေက အရေးမကြီးပါ။ လူတိုင်းက ကိုယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်၊ ကိုယ့်အလုပ်အောင်မြင်ရန်သာ အလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ အရေးကြီးတာက ...
သမီးရှင် ဖေဖေများ ဖတ်ရန်
လောကကြီးမှာ မိသားစုတခုမှာ အဖေဖြစ်သူနဲ့ သမီးကြားမှာ အမြဲဆိုသလို ပြသာနာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီပြသာနာလေးတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ။ သမီးက မေမေ့ကိုပြော၊ မေမေက ဖေဖေ့ကို စကားလက်ဆင့်ကမ်းကြမှာပါ။ ဒါပင်မဲ့ မကြာခင် အချိန်ကျရင်တော့ အဖေများနေ့ဆိုတာကိုလည်း ရောက်တော့မှာပါ။ သမီးဖြစ်သူက ဖေဖေ့သိစေချင်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့
ပိုက်ဆံစုမိတဲ့သူတွေရဲ့ တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ၅ ချက်
ကိုယ့်မှာဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရှိနေပင်မဲ့ ငွေမစုမိတဲ့လူမျိူးလည်းရှိသလို၊ ဝင်ငွေနည်းပင်မဲ့လည်း သေသေချာချာ စုဆောင်းတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ ၁. ငွေစုစာအုပ်ကို သူ့နေရာနဲ့ သူသုံးပါ ငွေကို အသုံးပြုတဲ့ နေရာအပေါ် မူတည်ပြီး ငွေစုစာအုပ်ကို ခွဲထားရင် ငွေရဲ့လည်ပတ်မှုကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – လစဉ်သုံးနေတဲ့ ငွေစာရင်း နဲ့ အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းပြီး စုနေတဲ့ ...
ရေချိုးရင်းနဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ စစ်ကြည့်ကြရအောင်
ရေလောင်းချိုးချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ (၁) ခြေထောက်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲသောသူ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အတွေးတွေရှိတက်ပါတယ်။သူတပါးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းလက်ခံတက်ဖို့လိုပါတယ်။ (၂)လက်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ သူကတော့ အချွဲသန်တက်ပြီး တယောက်တည်းနေရမှာကို သိပ်ကြောက်တက်ပါတယ်။ဒါပင်မဲ့ ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေများများရအောင်ကြိုးစားပါ။ (၃)ခေါင်း၊ဆံပင်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ သူကတော့ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာမှန်းရခက်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိပြီး လုပ်လိုက်ရင် တစ်ဝက်တစ်ပြတ် ဖြစ်နေတက်ပင်မဲ့ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ (၄)ရင်ဘတ်၊ ဗိုက်ကနေစပြီး ...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ၁ လအတွင်းမှာ စိတ်အခြေအနေက အမျိုးမျိုးကို ပြောင်နေတာနော်။ မိန်းကလေးတွေ ၁ လတာ အတွင်း စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မိန်းကလေး ဟိုမုန်း အခြေအနေကြောင့်ပါ။ ၁ လ အတွင်း မှာ စိတ်ကလေ ၄ ကြိမ်တောင် ပြောင်းတာနေတာပါ။ ပထမ – အကုန်လုံးကို လက်မြောက်အရှုံးပေးချင်လောက်အောင် ...
မှန်ကန်တဲ့ချစ်ခြင်း နဲ့ အဆိပ်သင့်စေတဲ့ချစ်ခြင်း
ချစ်တော့ ချစ်ပါရဲ့, အချစ်မှား ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ်အမှားလေးတွေမဖြစ်ရလေအောင်……… မှန်ကန်တဲ့ ချစ်ခြင်း – ချစ်သူနှစ်ဦးလုံး ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အတွက် ကြိုးစားရင်း ပျော်ရွှင်စရာ ချစ်သံယောဇဉ်တွေကို တိုးလို့တည်ဆောက်လာနိုင်မယ်။ မှားယွင်းတဲ့ ချစ်ခြင်း – ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းအတွက် အာရုံမစိုက်ဘဲ ချစ်သူ နဲ့ ...
အမေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရင်းနီးဆုံးသော သူငယ်ချင်းဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ စိတ်ညစ်နေရချိန်၊ ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်တွေမှာ အမြဲအတူတူရှိနေပင်မဲ့လည်း တချိန်မှာတော့ရှိချင်မှရှိတော့မှာပါ။ ဒီတော့ နောင်တတွေ မရအောင် အမေဆီ ဖုန်းဆက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ၀၁. အမေ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးက သား(သို့) သမီးပါ။ ၀၂. ကိုယ့်အကြောင်းကို မိနစ် ၃၀ လောက်ပြောရင်လည်း အမြဲနားထောင်ပေးသူပါ။ ...
You TubeမှာTrending No 1 ဖြစ်နေတဲ့ Taylor Swift ရဲ့သီချင်းအသစ်
Taylor Swift ကတော့ သီချင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းကို ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အဝ ရယူထားနိုင်တဲ့သူပါ။ အခုဆိုရင် “You Need To Calm Down” သီချင်းကို MV အနေနဲ့ထွက်ရှိလာတာတစ်ရက်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း You Tube မှာတော့ Trending No 1 ဖြစ်နေပါပြီ။ ပရိသတ်တွေဝက်ဝက်ကွဲအားပေးနေတဲ့ဒီသီချင်းဟာ LGBT တွေကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့သရုပ်ဖော်ထားတာသလိုLGBT ဆယ်လီဘရစ်တီတွေအများကြီးလည်း ...
ချစ်သူနှစ်ဦး ပွေ့ဖက်ပုံကနေသိနိုင်မယ့် သင်တို့နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ယုံကြည်မှုရဖို့နဲ့ စိတ်လုံခြုံမှု ခံစားရစေဖို့အတွက် ပွေ့ဖက်ခြင်းက အလှပဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်မှုပါ။ ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကို သူဟာ သင့်အတွက် အရေးပါတဲ့ သူဖြစ်ပြီး ချစ်တယ်ဆိုတာ ခံစားမိစေပါတယ်။ စက္ကန့် ၂၀ ထက်ပိုကြာတဲ့ ပွေ့ဖက်ခြင်းတွေဟာ သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေပြီး အထီးကျန်မှု၊ အဖော်မဲ့မှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်တည်နေမှု၊ ပူပင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ...
Exo’s D.O ရဲ့ 1st solo mini album ကို သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ Lee Kwang Soo
ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် Nevertheless ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Kim Min Gwi ဇာတ်ဝင်ခန်းလျော့ကျနိုင်
ခပ်ဆိုးဆိုး Character နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ရင်ကို ပိုထိစေတဲ့ မင်းသားချောလေးများ
Japan 1st Full Album အနေနဲ့ ဩဂုတ်လထဲထုတ်လုပ် တော့မဲ့ Blackpink’s The Album